Umgaqo-nkqubo wokuFikelela kwiWebhu | Umbutho wokuKhuthaza iNkcubeko yeWadi yeOta
Iwebhusayithi yoMbutho wokuKhuthaza iNkcubeko yeWadi yeOta kufuneka ifumaneke kuye wonke umntu, kubandakanya abantu abadala kunye nabantu abakhubazekileyo., Isoftware kunye neeNkonzo-Icandelo 8341: Umxholo weWebhu, ngenjongo yokuthobela inqanaba "AA".
* Isaziso esithi "ukuthotyelwa" kulo mgaqo-nkqubo sisekwe kwisaziso esichazwe kwiKomiti yoLwazi kunye noNxibelelwano yokuFikelela kwiWebhu yeKomiti yeZiseko zokuFikelela "i-JIS X 8341-3: 2016 Izikhokelo zokuthobela iziKhokelo zoMxholo weWebhu-Matshi 2016 uHlelo".
Umbutho Wokukhuthaza Inkcubeko kwiwadi yeOta
Inqanaba lokuthobela ekujoliswe kuko kunye nokuphendula
Ukuhambelana ne-JIS X 8341-3: Inqanaba le-2016 le-AA
Iikhrayitheriya zempumelelo zokongeza
Inqanaba elilandelayo izinto zeAAA
I-JIS X 8341-3 2.2.3 Ixesha elizimeleyo leMpumelelo
I-JIS X 8341-3 2.3.2 Iikhrayitheriya eziyimpumelelo zokukhanya okungama-3
I-JIS X 8341-3 2.4.8 Iikhrayitheriya zempumelelo zesikhundla esikhoyo
PDF (Ifomathi yoXwebhu oluPhathekayo)
Igama (iLizwi (iMicrosoft Word) ifayile
Iinkonzo ezinikezelweyo ezivela ngaphandle kunye nemixholo ehamba nazo okanye amaphepha ewebhu, imifanekiso, iividiyo, njl.
* Umzekelo we-3.
Iinkonzo ezibonelelwa ngoGoogle (ukhangelo olwenziweyo lukaGoogle, iividiyo zeYouTube, imephu zikaGoogle, ukuJongwa kwesitalato sikaGoogle, njl.
I-SNS (Twitter, Instagram, LINE, njl.
Amaphepha eelwimi ezininzi aveliswe ngoguqulelo oluzenzekelayo olunikezelwa yimimandla engezantsi
Umxholo ongabhalwanga A 〇 〇
Umsindo kuphela nevidiyo kuphela (kurekhodwe) A - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Isihloko (kurekhodwe) A - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Amagqabantshintshi alalelwayo okanye okunye okunye kwimithombo yeendaba (kurekhodwe) A - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Isihloko (bukhoma) AA - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Amagqabantshintshi alalelwayo (abhalwe) AA - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Ulwazi kunye nobudlelwane A 〇 〇
Ucwangco olunentsingiselo A 〇 〇
Iimpawu ezibonakalayo A 〇 〇
Ukusetyenziswa kombala A 〇 〇
Ulawulo lwezwi A - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Umahluko (ubuncinci benqanaba) AA 〇 〇
Yenza ubungakanani kwakhona kokubhaliweyo AA 〇 〇
Umbhalo obhaliweyo AA 〇 〇
ikhibhodi A 〇 〇
Akukho mgibe wekhibhodi A 〇 〇
Ukulungiswa kwexesha A - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Yima, ume uze uzifihle A 〇 〇
Ixesha elizimeleyo AAA - 〇 Akukho mxholo usebenza.
XNUMX idanyaza okanye ngaphantsi kwexabiso lombundu A - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Amaxesha ama-XNUMX okukhanya AAA - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Yeka ukutsiba A 〇 〇
isihloko sephepha A 〇 〇
Gxila kulungelelwaniso A 〇 〇
Injongo yekhonkco (kwimeko) A 〇 〇
Iindlela ezininzi AA 〇 〇
Izihloko kunye neelebheli AA 〇 〇
Gxila ekubonisweni AA 〇 〇
Ulwimi lwephepha A 〇 〇
Ezinye iilwimi AA 〇 〇
Xa kugxilwe A 〇 〇
Ngexesha lokufaka A - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Ukuhamba ngokuhambelana AA 〇 〇
Ukwahluka okungaguqukiyo AA 〇 〇
Ukuchongwa kwempazamo A - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Ileyibhile okanye inkcazo A - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Iingcebiso zokulungisa iimpazamo AA - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Impazamo yokuthintela (ezomthetho, ezemali kunye nedatha) AA - 〇 Akukho mxholo usebenza.
Ukwahlula A 〇 〇
Igama, indima kunye nexabiso A 〇 〇
* Ukusukela nge-3 kaMatshi unyaka kaReiwa
I-146-0092-3 Shimomaruko, Ota-ku, eTokyo 1-3
Inombolo yefowuni: 03-3750-1611